कसरी आयो निखिल उप्रेतीमा बैराग्य ? कस्तावाट कस्ता भए, यसरी आयो उनको जिवनमा परिवर्तन (भिडियो हेर्नुस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/कसरी आयो निखिल उप्रेतीमा बैराग्य ? कस्तावाट कस्ता भए, यसरी आयो उनको जिवनमा परिवर्तन (भिडियो हेर्नुस्)
महामारीका कारण यतिबेला मनोरञ्जन क्षेत्र ठप्प छ । लकडाउन खुलेपछि झन्डै एक महिना मनोरञ्जन क्षेत्रमा गतिविधि सुरु भइसकेको थियो । तर, भदौ पहिलो सातादेखि सुरु भएको निषेधाज्ञाले अहिले सबै घरमै थन्किएर बसेका छन् ।
यतिबेला सबै कलाकार फुर्सदमा छन् । घरमा बस्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । संक्रमण फैलिने डरले अहिले धेरै कलाकारका रूप रंग अर्कै भएका छन् । अधिकांश पुरुष कलाकारले कपाल र दाह्री जुँगा पालेका छन् । यिनैमध्ये अभिनेता निखिल उप्रेती पनि पर्छन्, जसले महामारी सुरु भएयता दाह्री जुँगा फालेका छैनन् ।
निखिल लामा लामा दाह्री र जुँगा पालेको अवतारमा देखिएका छन् । यो कुनै चलचित्रका लागि पालेको होइन । उनले यसबीचमा कपालसमेत पालेका छैनन् । निखिल वाहिरी आवरणमा मात्र होइन उनको भित्री भावनामा पनि निकै परिवर्तन आएको छ । उनी आफुले अहिले चलचित्र नपाएको कुरा खुलस्त भन्छन् । उनले आफुलाई दयाको पात्र नबनाउने भन्दै आफुले काम नपाएको कुरा भन्दा कुनै ग्लानी नलाग्ने बताउँछन् ।
आफुलाई नकारात्मक टिप्पणी गर्ने राजेन्द्र खड्गीका बारेमा उनले पनि निकै चोटीलो जवाफ दिए । उनले अहिले आफुभित्र भएको नकारात्मक भावना अरुलाई गा ली गरेर वाहिर निकाल्ने गरेको बताउँछन् । उनले अहिले कलाकारहमा देखिएको यो समस्या पनि त्यसैको कारणले भएको बताउँछन् ।